तपाईको ब्लगलाई अनुकूलित गर्न मेरो १० सल्लाहहरू Martech Zone
आइतबार, अगस्त 13, 2006 शुक्रबार, जुन 19, 2015 Douglas Karr
कम्प्यूटर शपरको एउटा लेख छ तपाईंको ब्लगलाई अनुकूलित गर्दै। लेखमा केहि सल्लाह छ जुन उपयोगी छ तर मलाई लाग्दैन कि उनीहरूको प्राथमिकता ठीक हो र न त उनीहरूले सबै आवश्यक चीजहरू समेटे। म मेरो ब्लगमा गत दुई महिनामा स्थिर यातायात बढाइरहेको छु। म ध्यानपूर्वक मेरो पाठकहरूको मापन गर्दैछु, मेरा पाठकहरुको स्रोतहरु, र तदनुसार समायोजन गर्दैछु। मैले गत केही महिनामा एक टन सिकेकी छु।
यहाँ मेरो शीर्ष टेन छ:
तपाईंको ब्लग कस्तो देखिन्छ भनेर चिन्ता नलिनुहोस्। म यस बिन्दुमा लेखसँग असहमत छु। धेरै ब्लगहरू धेरै सरल छन्, र केही महान ब्लगहरू सीधा कुरूप छन्। व्यक्ति पोष्टको गुणस्तरबाट आकर्षित हुन्छन्, सुन्दर लेआउट होइन। अपवाद, अवश्य हो, यदि तपाईं डिजाइन र ग्राफिक्सको बारेमा ब्लग गर्नुहुन्छ।
साइटमा तपाईंको आफ्नै तस्वीर वा बहु तस्वीरहरू राख्नुहोस्। मेरो हेडरमा मेरो तस्वीरको साथसाथै मेरो फोटो पनि याद गर्नुहोस् बारेमा पृष्ठ एक ब्लग तपाईको पाठकहरु संग कुराकानी हो। यो कुराकानी गर्न गाह्रो छ जब तपाईं कोसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्छ थाहा छैन!
निम्नलिखित सुविधाहरू भएको ब्लगि software सफ्टवेयरको उपयोग गर्न निश्चित गर्नुहोस्: ट्र्याकब्याक्स, पिंगहरू, लिंकहरू, ट्यागहरू, कोटीहरू, पर्मालिinks्कहरू, टिप्पणीहरू, खोज, साइटम्यापहरू, स्पाम सुरक्षा, खोज र आरएसएस। ती सबैलाई प्रभावकारी रूपमा कसरी प्रयोग गर्ने जान्नुहोस्। म प्रयोग गर्छु WordPress। यसका केही सुविधाहरूको लागि केही प्लगइनहरू आवश्यक पर्दछ, तर यो प्रयोग गर्न सरल र धेरै बलियो छ। WordPress को साथ होस्ट भन्दा, मैले सफ्टवेयर डाउनलोड गरें र आफैंलाई होस्ट गरें - त्यस तरीकाले म सफ्टवेयर, डाटा, URL र विज्ञापनमा नियन्त्रण गर्दछ - र यसलाई मेरो मनपर्नेमा अनुकूलित गर्न सक्छु।
कम्तिमा एक सेवाको लागि साइन अप गर्नुहोस् टेक्नोराटी तपाईंको ब्लगमा जोखिम बढाउन। मान्छे ट्यागिंग को लागी पोष्टहरु पढ्न को लागी खोजी गर्दछ।
जब तपाईं एक ब्लग फेला पार्नुहुन्छ तपाईंले वास्तवमै रमाईलो गर्नुहुन्छ, तपाईंको साइटमा लिंक राख्नुहोस्। मेरो साइडबारमा मेरो लिंक याद गर्नुहोस्। नराम्रो नहुनुहोस् र पाठकहरूलाई सोध्नुहोस् जुन तपाईंको ब्लगमा तपाईंको लिंकको लागि मजा लिन्छन्। अधिक र अधिक साइटहरु तपाइँको ब्लग मा लिंक रूपमा, तपाइँको ब्लग मा यसको वृद्धि जारी रहनेछ अख्तियार। यसले ब्लग खोज ईन्जिनमा प्लेसमेन्ट सुधार गर्दछ।
राम्रो आरएसएस पाठकको उपयोग गर्न सुरू गर्नुहोस् र अन्य ब्लगहरूको संख्यामा सदस्यता लिन सुरू गर्नुहोस्। म अहिले उपयोग गरीरहेको लगभग to० को सदस्यता लिन्छु गुगल ल्याब रिडर। यसले ट्र्याक राख्छ जुन मैले पढेको छु र केहि अन्य राम्रा सुविधाहरू छन्। म प्रायः अन्य पोस्टहरूमा टिप्पणी गर्दछु र लिंकलाई सधैं मेरो साइटमा फिर्ता छोड्दछु। यदि म टिप्पणीको सट्टा पूर्ण पोष्ट लेख्न चाहान्छु, म सँधै सुनिश्चित गर्दछु कि म उनीहरूको लेखमा ट्र्याकब्याक निर्दिष्ट गर्दछु।
एक राम्रो एनालिटिक्स उपकरण प्रयोग गर्नुहोस्। म प्रयोग गर्छु गुगल किनकि यो दुबै सित्तैमा र वर्डप्रेससँग एकीकृत गर्न धेरै सरल छ। म केवल मेरो थिमको फुटरमा एक सानो स्क्रिप्ट (कि Google आपूर्ति गर्दछ) राख्छु र म जान राम्रो लाग्छ! तपाईंको एनालिटिक्स जाँच गर्नाले तपाईंलाई कसरी तपाईंको साइटमा पाठकहरू आउँदैछन्, तपाईंको लेखहरूको लोकप्रियता, र कुन खोज शब्दहरूले उनीहरूलाई आकर्षित गर्दछ, आदि हेर्न मद्दत गर्दछ।
फिड उपकरणको उपयोग गर्नुहोस्। म प्रयोग गर्छु फिडप्रेस। योसँग योसँग एक धेरै थप सुविधाहरू छन् र तपाईंलाई तपाईंको फिड प्रयोग मापन गर्न अनुमति दिन्छ। सल्लाहको एक शब्द, तपाईंको ब्लग हेडर आरएसएस पदनाम प्रतिस्थापन गर्न निश्चित गर्नुहोस्। अधिकतर आरएसएस सदस्यता उपकरणहरू केवल हेडरमा त्यो लिंकको लागि हेर्दछ। यदि तपाईं यसलाई तपाइँको फिडबर्नर आरएसएस पथको साथ बदल्नुहुन्न भने, तपाइँ ती सबै सदस्यहरूलाई कब्जा गर्नुहुने छैन!
प्राय: ब्लग मेरो ब्लगको साथ, मैले याद गरेँ कि यदि म १ वा २ लेखहरू लेख्छु भने मेरो फिर्ती आगन्तुकहरू बढिरहन्छ। चाखलाग्दो कुरा के छ भने, यदि म एक दिन छोड्छु भने मलाई दर्शकहरूमा 'क्याच' पछाडि जानुपर्दछ। यदि मैले २ छाड्छु भने, मैले केहि गुमाएँ। धेरै पटक ब्लग गर्न सावधान हुनुहोस्, यद्यपि। म सदस्यता लिन प्रयोग गर्थे Instapundit, तर एकल वाक्य लेखहरूले केहि मिनेटमा मलाई नटहरू ड्राइभ गर्दैथ्यो यसलाई जारी राख्न प्रयास गर्न। उसले आफ्नो ब्लगको साथ केहि ठूलो सफलता पायो, यद्यपि। केहि मानिसहरु यो मजा। मलाई लाग्छ यो ती मध्ये एक चीज हो जुन तपाईले ट्र्याक गर्नुपर्दछ र परीक्षण र त्रुटि मार्फत हेर्नु पर्छ। यहाँ अन्य कारक सामयिकता छ। सुनिश्चित गर्नुहोस् कि जब तपाईं सुन्नुहुन्छ वा कुनै शीर्षकमा केहि देख्नुहुन्छ, तपाईं सकेसम्म चाँडो प्रतिक्रिया गर्नुहुन्छ यदि तपाईं आफ्ना दर्शकहरू बढाउन चाहानुहुन्छ। पाठकहरूले घटनाको समयमा प्राय: खोजी गर्दछन्, न कि पछि।
राम्रोसँग ब्लग गर्नुहोस्। तपाईको ब्लगको साथ तपाई सँधै शीर्षकमा हुनुहुन्न। याद राख्नुहोस्, ब्लग तपाई र तपाईको पाठकहरु बीचको कुराकानी हो। उनीहरूले तपाईंलाई चिनेका छन् र तपाईंले उनीहरूलाई चिन्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईंको छुट्टीको केही जोडी चित्रहरू वा तपाईंको कुकुरले तपाईंको संसारमा उनीहरूलाई अलि गहिरो जान दिनेछ र उनीहरूसँग अझ ठूलो बन्धन सिर्जना गर्दछ। म प्राय: जसो मँ ब्लग गर्न सक्दछु भनेर दिनहुँ समय खर्च गर्दछन्। एक दिन बित्दैन जुन म केहि सिक्न सक्दिन, केहि अवलोकन गर्दिन, वा केहीको बारेमा सुन्न सक्दिन ... त्यसैले म यसलाई आफ्ना पाठकहरूमा बताउन पाउँदा मलाई रमाइलो लाग्छ। इमानदार हुनुहोस्, र तपाइँले के राम्रो गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा गर्नुहोस्।
त्यसोभए मैले यति टाढा सिकेको छु। एक्सपोजर बढाउन र मेरो पोष्टको गुणस्तर सुधार गर्न मँ आफ्नो ब्लगमा समायोजन गर्न जारी राख्छु। ब्लगिंग निरन्तर सुधार को बारे मा छ।
म केहि पठन सामग्री सिफारिश गर्दछु ... मेरो मनपर्ने छ नग्न कुराकानीहरू, तर मैले अन्य ब्लगि books पुस्तकहरूको एक महान सूची फेला पारे कन्भेर्स्टेशनहरू.
अपडेट: अगस्त १,, २०० - - प्रोब्लगरको लागि सबमिट गरियो सूचीहरूको लागि समूह लेखन परियोजना.
टैग: विश्लेषणब्लग डिजाइनब्लगरब्लगिंगविभागटिप्पणीफिडसुरु गर्दैInstapunditलिंकpermalinksपिङ्गआरएसएसमार्केटिंग खोज्नुहोस्साइडबारसाईटम्यापहरूस्पाम सुरक्षाट्यागटेक्नोराटीtrackbacks
अगस्ट,, २०१ 13 2006:२१ अपराह्न
उत्कृष्ट पोष्ट डग! मूर्ख जस्तो देखिन्छ, मसँग number नम्बरको समस्या छ। मसँग मेरो तस्बिर छ जुन मैले मेरो पृष्ठमा राखेको छु, तर यो गर्न मलाई गाह्रो थियो। म यसलाई मेरो ब्लगमा राख्थें ताकि मेरा बुवाले तुरुन्त याद गरे कि किन उनले पृष्ठ बुक गरे - तर यसले मलाई एक किसिमको असहज बनायो! मैले अर्को तस्विर लिनु पर्छ। तपाईं सहि हुनुहुन्छ - म सँधै प्रतिक्रियात्मक रूपमा चित्रहरूमा प्रतिक्रिया गर्दछु - मलाई थाहा छ म कोसँग कुरा गर्दैछु! (BTW - त्यो तपाईंको हेडरमा राम्रो चित्र हो!)
तपाईंले केहि महत्त्वपूर्ण पक्षहरू बिर्सनुभयो, कि अब म खुशीको साथ यो राम्रो ब्लग समृद्धि प्रदान गर्नेछु।
(१) डिजाइन कुनै पनि वेब साइटको पहिलो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो जुन स्ट्यानफोर्ड पर्सुसिएभ टेक र बीजे फोग, पीएचडीका अनुसार छ। यदि यो अश्लील, एमेच्योर, कुरूप, डरलाग्दो, बालिश, आदि देखिन्छ भने, प्रयोगकर्ताहरू सेकेन्डमा बेल आउट हुनेछ र कहिले पनि फर्कनेछैन।
(२) रिच, दुर्लभ, सान्दर्भिक सामग्री।
()) म्याट मुल्लेनवेगले मलाई उनको मुख्य रहस्य भनेको ब्ल्गोफियरसँग अन्तर्क्रिया गर्नु, पारस्परिक टिप्पणी गर्नु, अन्य ब्लगमा टिप्पणी पोष्ट गर्नु, अन्य ब्ल्गरहरूलाई महत्वपूर्ण जानकारी वा सल्लाहका साथ ईमेल गर्नु आदि ब्लग समुदायमा राम्रो छिमेकी बन्नु हो।
()) विविधता। अप्रत्याशित आश्चर्य। परिक्षण।
()) बहु मिडिया: पोडकास्टहरू, भिडियो प्लेयर इम्बेडहरू, फोटोहरू, कला, कार्टुनहरू, ग्राफहरू, चार्टहरू, इत्यादि।
()) तपाईंको आफ्नै ब्लगमा पोष्ट गरिएका टिप्पणीहरूमा द्रुत जवाफ, तपाईंको पाठकहरूसँग इमान्दारी र नम्रतापूर्वक अन्तरक्रिया गर्नुहोस्।
()) अगाडि प्रोफाइल वा मेरो बारेमा, र अगाडि सम्पर्क जानकारी वा वेब मेल फारम।
()) "सबैभन्दा लोकप्रिय पोष्टहरू" वा साइडबारमा अन्य प्रासंगिक पेचिलो कोटीहरूको सूची, हालका पोष्टहरू र मासिक अभिलेखहरूको साथ।
पक्षहरूलाई केहि सुझावहरू छन् जुन मलाई महत्वपूर्ण लाग्छ।
फेब्रुअरी १,, २०११ 11:१:2007 अपराह्न
महान सल्लाह, धन्यवाद। मैले # advice मा तपाईको सल्लाह लिन को लागी र Google एनालिटिक्स को उपयोग गर्न को लागी कोशिश गरी, तर म स्वीकार गर्न को लागी छ कि उनीहरुका निर्देशनहरु मेरो जस्तो गैर-टेक्निकल, वर्डप्रेस प्रयोगकर्ताहरु को लागी बुझिदैन। मेरो जीवनको लागि, मैले कोड हालेर राख्नु पर्छ भनेर उनीहरूले मलाई कोड राख्नु पर्ने छैन।
नमस्ते डग, मैले तपाईंको साइट द्वारा धेरै पटक रोकेको छु र म तपाईंलाई जे गरिरहेको छु रमाईलो गर्छु। तपाईंले केहि प्रासंगिक क्षेत्रहरू हाइलाइट गर्नुभयो जसले हामीलाई हाम्रो समीक्षा उपकरणहरू हालसालै हाम्रो ब्लगहरूमा प्रयोग गरिरहेछौं। केहि राम्रा सुझावहरुको लागी धन्यवाद।
फेब्रुअरी १,, २०११ 13:१:2007 अपराह्न
तपाईंको दयालु टिप्पणीहरूको लागि धेरै धेरै धन्यवाद, रोबिन! र भ्रमण गर्नुभएकोमा धन्यवाद !!!
जुन 7, 2007 मा 10: 25 PM
धेरै उत्कृष्ट र राम्रो लेखिएको लेख। मेरो नाम ग्यारी हो र म व्यक्तिगत ब्लगमा लेख्छु जुन मेरो पाठकहरूको लागि सफल ब्लगिंग सल्लाहहरू प्रदान गर्दछ। मँ गुगलमा खोजी गर्दै थिएँ लेख्न को लागी र यहाँ लेख लेखियो। उत्कृष्ट कार्य र म निश्चित हुनेछ कि मेरो अर्को पोस्ट मा यो लेख को लागी एक लिंक प्रदान गर्न को लागी। 🙂
जुन २,, २०१ बिहान :8:२२ बिहान
धन्यवाद गैरी! मँ तपाईको साइट चाँडै जाँच गर्दैछु।
नोभेम्बर २०, २००। 28::2007 अपराह्न
हो, यो एक धेरै धेरै राम्रो ब्लग हो। 😉
मैले भर्खर तपाईलाई मेरो मनपर्नेमा जोडें।
यो एक राम्रो विचार हो, मलाई मात्र थाहा छ कि यो खोजी ईन्जिनहरूमा पनि धेरै प्रभावकारी छ, उनको सुझावहरूको लागि धन्यवाद